Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Misokatra ny hotely avo indrindra eto an-tany any Shanghai, Sina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mirehareha amin'ny trano fisakafoanana amin'ny rihana faha 120 sy serivisy fitateram-bokatra manokana 24 ora, ny hotely mirehitra dia mitazona ny rihana ambony amin'ny Tilikambo Shanghai 632 metatra (2,073 metatra).
Ny trano fandraisam-bahiny avo indrindra eto an-tany dia misokatra amin'ny tranobe avo indrindra eran'izao tontolo izao any Shina.
Afaka mankafy ny trano fisakafoanana fito, hotely, spa ary dobo filomanosana amin'ny rihana faha-84 ny vahiny.
Ny alina ao amin'ny "J Suite" dia mitentina maherin'ny 67,000 yuan (10,377 XNUMX $).
Ny trano fandraisam-bahiny «avo indrindra» manerantany dia nanokatra ny varavarany ao amin'ny trano avo faharoa manerantany taorian'ny Dubai Burj Khalifa, any Shanghai, Sina.
Mirehareha amin'ny trano fisakafoanana amin'ny rihana faha 120 sy serivisy fitaterana 24 ora manokana, trano fandraisam-bahiny mirindra no mitazona ny rihana ambony 632-meer (2,073 metatra) Shanghai Tower ao amin'ny distrika ara-bola ao an-tanàna.
Ny ascenseur dia manasa olona vahiny am-paosy lava sy loha ho amin'ny haavony ho an'ny trano fonenana toy ny tadin-dokotra mampatahotra amin'ny hafainganam-pandeha 18 metatra isan-tsegondra mankany amin'ny efitrano malalaky ny J Hotel 165.
Ny fanokafana ny trano fandraisam-bahiny dia nahemotra noho ny areti-mandringana COVID-19 saingy izao dia nanomboka nahazo vahiny salama tsara izay afaka miantso ny serivisin'ny mpitondra kapoaka manokana na amin'ny ora na andro na alina.
Ny vahiny dia afaka mankafy ny iray amin'ireo trano fisakafoanana fito ao amin'ny hotely, fisotroana, spa, dobo filomanosana ao amin'ny rihana faha-84, sy ireo fandrika hafa mahazatra ao amin'ny hotely ambony.
Mazava ho azy fa tsy mora ny rendrarendra toy izany. Mba hankalazana ny fisokafany J Hotel dia manolotra "tahan'ny traikefa manokana" 3,088 yuan (450 $) isan'alina, fa ny vidin'ny 34 suites dia miakatra avo.
Ny alina iray ao amin'ny "J Suite", feno chandelier kristaly sy sauna, dia mitentina 67,000 yuan (10,377 XNUMX $) ny asabotsy izao.
Ity hotely ity dia ao amin'ny Jin Jiang International Hotels, vondrona iray an'ny fanjakana sinoa lehibe, ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy.